45s Sajid Javid: &#39;Wasiir kasta oo is-ixtiraam leh&#39; wuu diidi doonaa dalabka PM images and subtitles
Sharaf weyn ayey ii ahayd in loo adeego jagada kormeeraha iyo, inta aan aad ugu qancay ra'iisal wasaaraha doonayay inaan dib ii tixraaco, ma aanan aqbalin shuruudaha in uu ku lifaaqan. Markaa waxaan dareemay in la iiga hadhay ikhtiyaar aan ahayn inaan is casilo. Haatan, cidda i guuleysata waxaan heystaa taageerada buuxda ee ra'iisul wasaarahana wuu sii wadaa inaan ku raaxeysto taageeradayda buuxda, sidoo kale dowladda ayaa sidaas leh. Shuruudaha ku lifaaqan waxay ahaayeen shuruud ah inaan beddelo dhamaan lataliyayaasha siyaasada. Waad ogtahay, kuwanu waa dad si adag u shaqeeyay oo ka wakiil ah, ma ahan oo keliya dowladda, laakiin dalka oo dhan, qabtay shaqo cajiib ah. Waan awoodi waayey inaan aqbalo shuruudahaas. Ma aaminsani in wasiir is-ixtiraam leh uu aqbali doono shuruudahaas oo kale sidaa darteedna, sidaa darteed, waxaan dareemay in waxa ugu fiican inaan sameeyo ay ahayd inaan tago.
Sajid Javid: &#39;Wasiir kasta oo is-ixtiraam leh&#39; wuu diidi doonaa dalabka PM
< start="0.48" dur="3.26"> Sharaf weyn ayey ii ahayd in loo adeego jagada kormeeraha >
< start="3.74" dur="2.28"> iyo, inta aan aad ugu qancay ra'iisal wasaaraha >
< start="6.039" dur="3.621"> doonayay inaan dib ii tixraaco, ma aanan aqbalin shuruudaha >
< start="9.66" dur="1.28"> in uu ku lifaaqan. >
< start="10.94" dur="3.159"> Markaa waxaan dareemay in la iiga hadhay ikhtiyaar aan ahayn inaan is casilo. >
< start="14.46" dur="4.02"> Haatan, cidda i guuleysata waxaan heystaa taageerada buuxda ee ra'iisul wasaarahana wuu sii wadaa >
< start="18.48" dur="2.1"> inaan ku raaxeysto taageeradayda buuxda, sidoo kale dowladda ayaa sidaas leh. >
< start="21.44" dur="3.9"> Shuruudaha ku lifaaqan waxay ahaayeen shuruud ah inaan beddelo >
< start="25.349" dur="1.43"> dhamaan lataliyayaasha siyaasada. >
< start="26.779" dur="3.051"> Waad ogtahay, kuwanu waa dad si adag u shaqeeyay >
< start="29.83" dur="2.08"> oo ka wakiil ah, ma ahan oo keliya dowladda, laakiin dalka oo dhan, >
< start="31.91" dur="1.03"> qabtay shaqo cajiib ah. >
< start="33.38" dur="2.24"> Waan awoodi waayey inaan aqbalo shuruudahaas. >
< start="35.87" dur="3.53"> Ma aaminsani in wasiir is-ixtiraam leh uu aqbali doono shuruudahaas oo kale >
< start="39.41" dur="3.25"> sidaa darteedna, sidaa darteed, waxaan dareemay in waxa ugu fiican inaan sameeyo ay ahayd inaan tago. >